WebSite X5: Manangana, manaparitaka ary manavao tranokala amin'ny Desktop | Martech Zone
Tena mpankafy ny rafitra fitantanana atiny an-tserasera aho, saingy misy fotoana izay ilaintsika fotsiny ny manangana tranokala sy miasa. Ny fandrindrana ny CMS, ny fanatsarana azy, ny fitantanana ireo mpampiasa, ary avy eo ny fikirakirana ny tonian-dahatsoratry ny torolàlana na ny môdely voafetra izay mila fanamboarana dia afaka mampiadana ny fandrosoana rehefa manana filàna maika ianao hametraka tranokala.
Midira Tranonkala X5, fitaovana famoahana birao Windows ™ azonao ampiasaina amin'ny fananganana, fanaparitahana ary fanavaozana ireo tranokala. Tsy tonian-dahatsoratra - mpizara iray manontolo miaraka amina tranomboky modely, fitehirizam-bokin'ny stock stock, ary sintomy sy atsofohy ny editor amin'ny fonosana iray mahafinaritra. Tsy izany ihany fa ny modely sy ny interface dia mamela ny famolavolana mamaly mba hahitanao ny fijerin'ny tranokalanao amin'ny fitaovana rehetra.
Ny sehatra WebSite X5 dia misy galeran'ny sary, endrika mailaka, pejy arovan'ny tenimiafina, sora-baventy, ecommerce, bilaogy, tambajotra sosialy, ary fanamoriana sy famakiam-boky maro hafa hananganana karazan-tranonkala rehetra. Ny fahazoan-dàlana iray dia mamela anao hameno ny rindrambaiko amin'ny birao roa sy hanangana tranokala betsaka araka izay tadiavinao - tsy misy fetra.
Fampiasana tranokala X5
Mora ampiasaina amin'ny interface desktop
400,000 sary tsy andriana tafiditra ao
High custom customized
Fitaovana matihanina (endrika mailaka, faritra voatokana, fampidirana amin'ny db, e-varotra sns)
Tranonkala mandray andraikitra
12 volana fampiantranoana tafiditra
Fanohanana manokana amin'ny fiteny
Mitaky Windows ™ Vista, 7, 8, na 10
Misy fitaovana manokana ho an'ny asa rehetra, manomboka amin'ny fanovana sary sy sary, hatramin'ny famoronana bokotra, hatrany am-pamoronana menus, hatrany amin'ny Internet miaraka amin'ny motera FTP namboarina.
Andramo maimaim-poana ny tranokala X5!
Fampahafantarana: fampielezan-kevitra Buzzoole ity ary ampiasainay ny rohy hanarahanay azy amin'ny paositra.
Tags: biraonaodesktop softwarempanamboatra tranokala biraoamin'ny ftptranokala x5tranokalax5